Zvatingaita Kana Takanganisa Uye Zvatingaita Kuti Tisanyanya Kukanganisa
NYAYA IRI PAKAVHA “Ndicho Chipo Chandakanyanya Kufarira Kupfuura Zvese”
NYAYA IRI PAKAVHA Kutsvaga Chipo Chakanakisisa
NYAYA IRI PAKAVHA Ndechipi Chipo Chikuru Kupfuura Zvese?
Jesu Akanga Akaita Sei?
Zvaungaita Kana Wakanganisa
Nei Kuine maBhaibheri Akasiyana-siyana?
Nharireyomurindi | Nhamba 6 2017
SARUDZA MUTAURO Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aukan Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Batak (Karo) Batak (Toba) Biak Bicol Bislama Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) ChiSutu (South Africa) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Digor Drehu Efik Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Garifuna Georgian German Greek Guarani Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kabiye Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mongolian Myanmar Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngangela Nias Niuean Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Ponapean Portuguese Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Romanian Runyankore Russian Samoan Sango Saramaccan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tojolabal Tok Pisin Tongan Tsonga Turkish Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Umbundu Urhobo Uruund Venda Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Xhosa Yoruba Zande Zulu
Don naMargaret * vakafara pavakashanyirwa nemwanasikana wavo nemhuri yake. Pavakanga vava kuda kuenda, Margaret, uyo aimboita basa rekubika, akabva avabikira macaroni cheese, chikafu chaifarirwa nevazukuru vake.
Vanhu vese vagara pasi, Margaret akaunza chikafu chacho ndokuchigadzika patafura. Akavhura poto ndokushamisika kuti maingova nemuto wecheese chete! Margaret akanga akanganwa kuisa macaroni yacho!
Tese tinoita zvikanganiso, pasinei nezera redu kana kuti ruzivo rwatava narwo. Tinogona kutaura tisina kufunga, kuita chinhu panguva isiriyo kana kukanganwa kuita chimwe chinhu. Chii chinoita kuti tikanganise? Tingaita sei kana takanganisa? Tinogona kusaita zvikanganiso here? Maonero atinofanira kuita zvikanganiso achatibatsira kupindura mibvunzo iyi.
MWARI ANOONA SEI ZVIKANGANISO ZVEDU?
Patinoita chinhu chakanaka, tinofara kana tikarumbidzwa uye tinotozvirova dundundu. Kana tikazokanganisa tinofanirawo kubvuma chikanganiso chacho, kunyange tachiita tisingazivi kana kuti tisina kuonekwa nevamwe. Asi zvinotoda kuti tizvininipise.
Kana tichizvikudza, tinogona kurerutsa chikanganiso chatinenge taita, kupomera vamwe, kana kutoramba kuti takanganisa. Kuita izvozvo kunotoita kuti zvinhu zvitowedzera kuipa. Dambudziko racho rinogona kutadza kugadziriswa, kana kuti vamwe vanogona kutopiwa mhosva yacho. Kunyange kana tikasabvuma kuti takanganisa, tinofanira kuyeuka kuti “mumwe nomumwe wedu achazvidavirira kuna Mwari.”—VaRoma 14:12.
Mwari ane maonero akanaka panyaya yezvikanganiso. Muna Mapisarema, Mwari anonzi ‘ane ngoni nenyasha, haazorambi achiwanira mhosva nguva dzose, uyewo haazorambi akatsamwa nokusingagumi.’ Anoziva kuti tine chivi uye ‘anoyeuka kuti tiri guruva.’—Pisarema 103:8, 9, 14.
Sezvinoita baba vane ngoni, Mwari anoda kuti tione zvikanganiso semaonero aanozviita. (Pisarema 130:3) Shoko rake rine mazano akawanda anotibatsira kuziva zvatingaita patinokanganisa kana kuti patinokanganisirwa.
ZVATINGAITA KANA TAKANGANISA
Munhu paanokanganisa, kakawanda kacho anopedza nguva achipa vamwe mhosva kana kupa tuzvikonzero. Kana ukagumbura mumwe munhu, ingokumbira ruregerero wogadzirisa zvinhu kuti murambe muchiwirirana. Pane zvawakamboita here zvichibva zvavhiringa vamwe kana kutovhiringa iwe pachako? Panzvimbo pekungoramba uchinetseka nezvazvo kana kupa vamwe mhosva, kungogadzirisa zvinhu ndiko kuzvipedza. Kuramba mhosva yacho kunoita kuti urambe uchinetseka uye kunotoita kuti nyaya yacho ikure. Saka ingogadzirisa zvawakanganisa, wodzidza kubva pazviri.
Kana ari mumwe munhu akanganisa, zviri nyore kuti tibve tatoratidza kuti hatina kufarira zvaaita. Pane kudaro, ngatiitei zvakataurwa naJesu paakati: “Naizvozvo, zvinhu zvose zvamunoda kuti vanhu vakuitirei, vaitireiwo saizvozvo.” (Mateu 7:12) Kana ukaita chikanganiso, kunyange chidiki, unoda kuti vamwe vakunzwisise kana kuti vatokuregerera. Saka itawo izvozvo kana wakanganisirwa.—VaEfeso 4:32.
ZVATINGAITA KUTI TISANYANYA KUKANGANISA
Rimwe duramanzwi rinoti zvikanganiso zvinokonzerwa “nekutadza kuona zvinhu sezvazviri, kusaziva, kana kuti kuvarairwa.” Tese tinomboita zvinhu izvozvo. Asi kana tikaziva zvinotaurwa neBhaibheri, tinogona kuita zvikanganiso zvishoma.
Pana Zvirevo 18:13 panoti: “Kana munhu achipindura nyaya asati ainzwa, ihwohwo upenzi kwaari uye kuzvinyadzisa.” Kutanga wanzwisisa nyaya yacho uye kufunga usati wataura kunobatsira kuti usazotaura kana kuti kuita zvinhu zvaunozodemba. Kunyatsoongorora zvinhu kunokosha nekuti kunokubatsira kuona zvinhu sezvazviri, uye hauzoiti chikanganiso.
Pana VaRoma 12:18 panoti: “Kana zvichibvira, nepamunogona napo, ivai norugare nevanhu vose.” Ita zvese zvaunogona kuti uve nerugare nevamwe. Paunenge uchishanda nevamwe, inzwawo kuti vanofungei, varemekedze uye vakurudzire. Kuita izvozvo kunoita kuti kana pakaita zvikanganiso zvidiki, hauzozviiti nyaya hombe uye kana zvikanganiso zvacho zviri zvikuru, muchazvigadzirisa murugare.
Dzidza kubva pachikanganiso chaunenge waita. Panzvimbo pekuramba zvawakanganisa, ona chikanganiso chacho semukana wekuti udzidzire kuva neunhu hwakanaka. Pamwe uchaona kuti unofanira kuwedzera kuva nerudo, rugare, mwoyo murefu, mutsa, unyoro kana kuti kuzvidzora. (VaGaratiya 5:22, 23) Unogona kudzidza zvaungaita kuti usazodzokorora chikanganiso chacho. Kunyange zvazvo usingafaniri kurerutsa chikanganiso chacho, usabva wanyanya kuzvipa mhosva. Kuseka nezvazvo kunobatsira kuti usaramba uchinetseka.
KUVA NEMAONERO AKANAKA KUNOTIBATSIRA
Kuva nemaonero akanaka panyaya yezvikanganiso kunotibatsira. Hatizonyanyi kunetseka uye tinoramba tichiwirirana nevamwe. Kana tikaedza kudzidza kubva pazvikanganiso zvedu, tichava vakachenjera uye vamwe vachawedzera kutifarira. Hatizonyanyi kuzvidya mwoyo kana kuti kuzviona sevanhu vakanyanya kuipa. Kuziva kuti vamwe vanonetsekawo nezvavanokanganisa kuchaita kuti tivanzwisise. Kuziva kuti Mwari ane rudo uye anoregerera nemwoyo wese kuchaita kuti tide kumutevedzerawo.—VaKorose 3:13.
Chikanganiso chaMargaret chambotaurwa chakagumbura mhuri yake here? Aiwa. Vese, kunyanya Margaret wacho, vakatoseka ndokudya chikafu chacho chisina macaroni! Papera makore, vazukuru vacho vakazotaurirawo vana vavo nyaya yacho, vachivaudza kuti vaida mbuya nasekuru vavo chaizvo. Mbuya vavo vakanga vasina kuzviita nemaune!
^ ndima 2 Mazita akachinjwa.
Mwari Achandikanganwira Here?
Verenga unzwe kuti Bhaibheri rinoti munhu anofanira kuita sei kuti Mwari amukanganwire.
Nhamba 6 2017 | Ndechipi Chipo Chikuru Kupfuura Zvese?
NHARIREYOMURINDI Nhamba 6 2017 | Ndechipi Chipo Chikuru Kupfuura Zvese?
Zvaungaita Kana Pane Zvawakanganisa